99 EUR maka awa 24 ? - Winches Club
Instagram bot kacha mma
Ndị na-eme ihe nkiri Instagram
Tinye ajụjụ ọchụchọ gị...
Kedu oge kacha mma biputere na Instagram ?
Ọ bụrụ na ị na -anwa ịbawanye ọkwa njikọ aka gị ma bulie ntọala ndị ahịa gị, posts gị kwesịrị ịdọrọ uche kacha oge ọ bụla. Enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ime iji meziwanye njikọ gị., ma a tụlere ha nke ọma na ngalaba blọgụ anyị:
Zube ha hashtags ewu ewu
Dee akụkọ ndụ Instagram dị ịrịba ama
Mepụta a aesthetic ịpụ iche
Ọ bụrụ na ị na -eme ihe ndị a niile ma mepụta nnukwu ọdịnaya, enwere otu ihe ikpeazụ ị nwere ike ime iji mee ka ọnọdụ gị gaa nke ọma:
Mepụta post mgbe mmadụ niile nọ n'ịntanetị.
Nke a agaghị ekwe ka ọtụtụ ndị mmadụ hụ ọkwa gị., kamakwa iji bulie ike ya maka ojiji na ịkekọrịta. Anyị ga -eburu n'uche ihe ụfọdụ n'oge ọrụ a. Yabụ ka anyị bido site na ịchọta oge kacha mma iji bipụta post gị na Instagram..
Enwere oge dị mma iji biputere na Instagram ?
Na mpempe, ọ dị ka ụbọchị na oge akọwapụtara nke obodo Instagram n'ozuzu na -arụsi ọrụ ike. Lelee eserese a nke na -egosi ọkwa njikọ aka niile nke Instagram na CST : (Akụkọ gbasara akpaaka Instagram)
Tebụl a na -egosi na ụbọchị kacha mma biputere na Instagram bụ:
Anyị ga -ahụkwa na oge kacha mma biputere na Instagram bụ:
Akụkọ gbasara akpaaka Instagram
Anyị nwekwara ike ịhụ na ụbọchị kacha njọ maka biputere bụ:
Oge kacha njọ iji biputere bụ:
Naanị nke a na -enye anyị nnukwu mmalite maka post n'oge kwesịrị ekwesị iji nweta njikọ aka kacha mma..
Gịnị Banyere Mpaghara Oge ?
Mpaghara oge bụ ihe na -ekpebi oge kacha mma iji bipute na soshal midia. Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị na -ege gị ntị nọ na mba ofesi, ị kwesịrị ịtụle imeghari usoro mgbasa ozi gị ka o wee mezuo nhazi ọrụ ndị a.
Nke a bụ ikwu na ọ bụrụ na ịnọ na UK ma enwere ọtụtụ ndị nọ na US na Canada nwere mmasị na ọdịnaya gị., Akụkọ gbasara akpaaka Instagram.
Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịnọ na UK ma enwere ọtụtụ ndị nọ na US na Canada nwere mmasị na ọdịnaya gị, Akụkọ gbasara akpaaka Instagram :
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ na Wenezdee elekere 11 nke ụtụtụ na Chicago, ị ga -ezipụ ebe a na UK n'elekere anọ nke ehihie.
Ọ bụrụ na ịchọrọ imetụ mpaghara oge abụọ aka n'otu oge, Akụkọ gbasara akpaaka Instagram, Akụkọ gbasara akpaaka Instagram.
Enwere ngwaọrụ na -enyere gị aka ịme mgbanwe n'oge ụfọdụ oge niile site na ịhazi usoro mgbanwe.
N'ụlọ IBF, anyị etinyela n'ime ikpo okwu anyị ọmarịcha onye mmemme nke na -enye gị ohere ịhazi mmemme nke ọdụ ụgbọ ala na -echeghị banyere ya.
Chọpụta mgbe ndị na -ege gị ntị na -arụsi ọrụ ike site na iji nghọta Instagram
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ azụmahịa Instagram, Instagram na -eme ka ọ dị mfe ịlele metrik njikọ aka gị na Insights Instagram. Insights Instagram na -enye gị data nkeonwe maka akaụntụ gị, ọ dị mfe nghọta ma dịkwa mfe ịnweta:
Nnweta gaa na ibe akaụntụ gị site na ịpị akara ngosi dị na ala aka nri nke foto profaịlụ gị
Pịa na menu “hamburger” n'elu aka nri
Metụ aka nhọrọ Insights nwere eserese mmanya n'akụkụ ya
Ị nwere ike ịgbanwe site na ọnụ ọgụgụ ọdịnaya gaa na data ọrụ yana metrik ndị na -ege ntị.
Daalụ maka eserese ndị a, ị nwere ike nweta ozi zuru ezu gbasara otu ndị na -ege gị ntị si etinye aka, yana oge na ebe ọ nọ.
Anyị nwere ike ịhụ nke ahụ maka akaụntụ a, Mọnde na Wenezde bụ ụbọchị kacha mma maka uto profaịlụ, nke dabara na tebụl nkwa anyị niile. Anyị nwekwara ike ịhụ ebe kacha mma, nke bụ nnukwu ozi ịmara mgbe ị na -atụle mpaghara oge na oge mbipụta.
Na ozi a, ị ga -enwe ike ikpebi ebe ị ga -adaba kpọmkwem maka ihe ngosi ka ị nweta ọkwa kachasị elu.
Anyị nwekwara ike ịhụ ihe dịka mmebi nwoke na nwanyị, yana oge ndị na -eso akaụntụ a na -akpa ike.
Malite na -ebuli ozi Instagram gị elu
Ọ bụrụ n'ezie na ịchọrọ ito akaụntụ gị wee nweta ọkwa njikọ aka kacha mma, ị ga -emerịrị sistemụ ndị a maka ọmụrụ nwa gị. Enwekwara ngwa ndị ọzọ nke atọ na-enye ndị ọrụ Instagram ohere ịhụ ozi ndị ọzọ gbasara akaụntụ ha n'ụzọ bara uru maka uto nke akaụntụ ha..
Nyochaa Ọha na-enye ozi dị mfe, dị omimi ka ị nwee ike ịghọta ndị na-ege gị ntị nke ọma ma soro ọganihu akaụntụ gị. Ha na -eme nnwale n'efu, yabụ debanye aha wee malite ugbu a. Ị nwere ike jikọta ya na nke anyị ngwanrọ akpaaka nwere ọgụgụ isi ma hazie mbipụta n'oge kacha mma iji nweta njikọ aka kachasị na akaụntụ gị.
Ngwá ọrụ uto Instagram kacha mma
Kacha ewu ewu
Instagram agaghị ekwe ka m banye : Ndozi ndozi
Kedu ihe kacha mma Instagram Bots na 2020 yana otu esi echekwa akaụntụ gị?
Otu esi akpọtụrụ ndị na -emetụta ya na Instagram
99 EUR maka awa 24
Nchekwa onwe dị ka Instagram: Bot Maka Mmasị akpaaka
Edemede gara agaInstagram agaghị ekwe ka m banye : Ndozi ndozi
Akụkọ na-esote99 EUR maka awa 24
© Nwebiisinka - WinchesClub.com amụma nzuzo